UN Supports Myanmar Nationals Returning from Abroad | IOM Myanmar
[Myanmar Text Below]
The United Nations in Myanmar, together with its national and international partners, are working with the relevant government authorities in their efforts to protect the wellbeing of Myanmar nationals returning from other countries and containing the spread of COVID-19 among migrants, their families and their communities.
Close to 46,000 migrant workers, an estimated 35 per cent of whom are women, have returned from abroad as of 16 April, according to official data from the Government of Myanmar. Thousands more are believed to have returned through unofficial border crossings. Many returning migrants facearange of immediate health-related challenges and have substantial humanitarian needs, particularly during the period of quarantine. In addition to public health concerns, the sudden and unplanned return has left many with unresolved labour and psycho-social issues that require immediate assistance, together with significant socio-economic impacts, for example due to the loss of income through remittances.
The United Nations has mountedacollective response and supported the Government to put in place relevant measures to protect their physical and socio-economic well-being, as well as reduce their exposure to COVID-19.
The UN’s International Organization for Migration (IOM), with support from the Livelihoods and Food Security Fund (LIFT), funded by the United Kingdom, the European Union, Switzerland, Australia, the United States of America, Canada and Ireland and managed by United Nations Office for Project Services (UNOPS), is working closely with the Ministry of Health and Sports and the Ministry of Labour, Immigration and Population, as well as with civil society organizations in Shan, Chin and Mon states, and Ayeyarwady, Magway and Mandalay regions. The initiative is distributing hygiene items and Information, Education and Communication (IEC) materials on COVID-19 and combatting stigma against returning migrants, reaching an estimated 12,500 people so far. Thousands more have benefitted from interventions in other states and regions through efforts by the International Labour Organization (ILO) and other agencies, particularly in the South-East region of Myanmar.
At the end of March, the UNOPS LIFT Fund and its donors mobilized an additional US$1.3 million to support the work of IOM, ILO, BBC Media Action, The Border Consortium and other national and international partners. This initiative strengthens Myanmar’s response to reduce the impact of COVID-19 on vulnerable migrant population across the country. Specifically, efforts under this initiative will prevent the spread of the virus among women and men migrants, their families and their communities; mitigate the social and economic impacts on migrants and their family members experiencingaloss of livelihood; and protect the rights and dignity of migrant workers during the outbreak.
UN Women, through its Safe and Fair joint-project supported by the EU-UN Spotlight Initiative to Eliminate Violence against Women and Girls has partnered with women civil society organizations to support the management of community based quarantine centers in Kayin State. This includes provision of Personal Protective Equipment (PPE), adaptation of IEC material to the specific needs of returnee women migrant workers and strengthening of violence against women referral services.
The United Nations Refugee Agency (UNHCR) has provided direct support to State Health Departments, by handing over 18 units of heavy-duty washing machines in Kachin State for disinfection of clothes and linen at community-based quarantine facilities. In Bhamo and Lashio, tarpaulins, mosquito nets, sleeping mats and blankets were also provided for 650 people so far. In an effort boost capacity of local authorities to respond to the needs of returning migrants in community quarantine facilities, UNHCR is also scaling up assistance to reach 11,600 people in Kayin, Kayah and Bago East and Tanintharyi regions.
With support from the Government of Japan, IOM is also coordinating with local organizations and the Ministry of Health and Sports to strengthen logistics and procurement of supplies, support disease surveillance for COVID-19 at points of entry and develop and distribute risk communication and community engagement materials.
These interventions in particular have been in support to the work of the Kayin State Health Department, as Kayin is receiving some of the largest influxes of returnees. IOM is also supporting State Health Departments in Kachin, Rakhine and Mon states and the Yangon Regional Health Department by providing critical prevention supplies, such as protective equipment, and hygiene and non-food items for quarantine facilities, such as bedding, towels and mosquito nets.
The Access to Health Fund, funded by the United Kingdom, Sweden, United States and Switzerland and managed by UNOPS, is also supporting the Government with basic health staff surveillance activities at points of entry, as well as contact tracing activities that include returnees. These efforts will ensure that cases are detected early, suspected case properly quarantined and traced, before returns to community.
Through the Myanmar Humanitarian Fund, managed by the UN’s Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, IOM is also providing support to the Rakhine State Health Department on efforts to coordinate procurement and logistics.
The UNOPS-managed Access to Health Fund supports International Rescue Committee to provide health services in Rakhine, including support to the State Health Department.
The United Nations has supported the Myanmar Government in their efforts to contain the spread of COVID-19 and reaffirms its commitment to continue to support these ongoing efforts in every State and Region of the country. Through coordinated response, the United Nations and the Myanmar Government are working to ensure that most vulnerable populations, such as returning migrant workers, are not left behind.
The United Nations in Myanmar reiterates the words of the UN Secretary-General that “we cannot let fear go viral in fight against COVID-19”, stressing the importance of moving forward “with resolve and without stigma.” Only with solidarity and unity can we win this battle.
ပြည်ပမှ ပြန်ဝင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသားများအား ကုလသမဂ္ဂမှ ကူညီထောက်ပံ့ပေးမည်
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုလသဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများသည် ပြည်တွင်းပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့များနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရ အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ပြည်ပမှ ပြန်ဝင်လာသော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ သာယာဝပြောရေးနှင့် ရွှေ့ပြောင်းလာသူများ၊ ၄င်းတို့၏ မိသားစုများနှင့် ၄င်းတို့၏ ရပ်ရွာအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား COVID-19 ပျံ့နှံ့မှုကို ဟန့်တားကာကွယ်ရန်ကြိုးစားနေပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ တရားဝင်ထုတ်ပြန်သော ကိန်းဂဏန်းများအရ ဧပြီလ ၁၆ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လာသော အလုပ်သမားဦးရေမှာ ၄၆,၀၀၀ နီးပါးရှိပြီး၊ ၄င်းတို့အနက် ၃၅% မှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ထောင်ပေါင်းများစွာမှာ တရားမဝင်သော နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှတဆင့် ပြန်လာခဲ့ကြသည်ဟု ယူဆရပါသည်။ ပြန်လာသည့်လူများမှာ အထူးသဖြင့် စောင့်ကြည့်ကာလတွင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် လူသားချင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်မျိုးစုံ ရှိနေကြပါသည်။ အများနှင့်ဆိုင်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ စိုးရိမ်ရမည့်အကြောင်းများအပြင် အစီအစဉ်မရှိဘဲ ရုတ်တရက်ပြန်လာခဲ့ကြရခြင်းကြောင့် ၄င်းတို့မှာ မဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သော အလုပ်သမားကိစ္စများ၊ စိတ်ပိုင်းနှင့် လူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စများ ပါလာသည့်အတွက် ဥပမာ ငွေလွှဲ ခြင်းမှ ရရှိသော ဝင်ငွေရပ်တန့်ခြင်းအတွက် လူမှုစီးပွားသက်ရောက်မှုများကြောင့် အကူအညီ ချက်ချင်း လိုအပ်နေပါသည်။
၄င်းတို့၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် လူမှုစီးပွား သာယာဝပြောရေးကို ကာကွယ်နိုင်ရန်နှင့် COVID-19 ထိတွေ့ကူးစက်ခံရမှုမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများသည် စုပေါင်းကာ အစိုးရမှ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် လုပ်ငန်းများကို ကူညီထောက်ပံ့လျက်ရှိသည်။
ယူကေနိုင်ငံ၊ ဥရောပသမဂ္ဂ၊ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၊ သြစတြေးလျနိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အိုင်ယာလန်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းထည့်ဝင်ပြီး ကုလသမဂ္ဂစီမံကိန်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာရုံး (UNOPS) ၏ စီမံမှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် ရိက္ခာဖူလုံရေးအဖွဲ့ (LIFT) ၏ ထောက်ပံ့ မှုတို့ဖြင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း (IOM) သည် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင်ရှိသော အရပ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများတို့နှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းတို့သည် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုပစ္စည်းများ၊ COVID-19 ဆိုင်ရာ ပညာပေးလက်ကမ်း စာစောင်များ ဖြန့်ချီနေပြီး၊ ပြန်ဝင်လာသော ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံမရှိစေရန် ကြိုးပမ်းနေရာ လူပေါင်း ၁၂,၅၀၀ ခန့် ထံသို့ ရောက်ရှိပြီးဖြစ်သည်။ အခြားသော ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီးများတွင်လည်း အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ (ILO) မှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသဖြင့် ပြန်လာသူ ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက် အကျိုးသက်ရောက်စေပါသည်။
မတ်လ အကုန်တွင် UNOPS ၊ LIFT Fund နှင့် ၄င်းတို့၏ အလှူရှင်များက ဒေါ်လာ ၁.၃သန်း ရှာနိုင်ခဲ့ပြီး IOM၊ ILO၊ BBC Media Action၊ The Border Consortium နှင့် အခြားသော ပြည်တွင်းပြည်ပ မိတ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်းများ၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုဆောင်ရွက်ချက်များသည် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ထိရှလွယ်သည့်အခြေအနေရှိသော ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအပေါ် COVID-19 ၏ သက်ရောက်မှု လျော့ကျစေရေး ဖြေရှင်းရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ တုန့်ပြန်မှုကို ပိုမို ခိုင်မာစေပါသည်။ အထူးသဖြင့် ယခုဆောင်ရွက်မှုများသည် ရွှေ့ ပြောင်းအမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားများအကြား၊ သူတို့၏မိသားစုများနှင့် ရပ်ရွာများအတွင်းတို့တွင် ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားခြင်းကို တားဆီးကာကွယ်နိုင်မည့်အပြင်၊ ၄င်းတို့အပေါ်သက်ရောက်မည့် စားဝတ်နေရေး ဆုံးရှုံးမှုဒဏ်ကိုသက်သာစေပြီး၊ ကပ်ဆိုးကာလတွင် ရွှေ့ ပြောင်းလုပ်သားများ၏ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကိုလည်း ကာကွယ်ပေးပါမည်။
ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ကုလသမဂ္ဂတို့ ပံ့ပိုးပေးသော Spotlight Initiative to Eliminate Violence Against Women and Girls စီမံကိန်းဖြင့် UN Women အဖွဲ့သည် အမျိုးသမီး အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူပေါင်းပြီး ကရင်ပြည်နယ်တွင် ရပ်ရွာစောင့်ကြည့်မှုစခန်း စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ပံ့ပိုးကူညီလျက်ရှိသည်။ ထိုပံ့ပိုးမှုများတွင် တစ်ကိုယ်ရည် ကာကွယ်မှုပစ္စည်း(PPE) များ ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ပြန်ဝင်လာသော အမျိုးသမီး ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအတွက် ဆီလျော်သော ပညာပေးစာဆောင်များ ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ် အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာများ ကာကွယ်ဖြေရှင်းမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ တိုးမြှင့်ခြင်းလည်း ပါဝင်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး (UNHCR) သည်ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ရပ်ရွာစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းများတွင် အဝတ်အစားများနှင့် အိပ်ယာပစ္စည်းများ ပိုးသန့်စင်ရန် ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးဌာနများသို့ အကြီးစားအဝတ်လျှော်စက်များ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ ဗန်းမော်နှင့် လားရှိုးမြို့များတွင် လူ ၆၅၀ အတွက် တာပေါ်လင်များ၊ ခြင်ထောင်များ၊ ဖျာများနှင့် စောင်များ ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရပ်ရွာစောင့်ကြည့်စခန်းများတွင် ဒေသခံအာဏာပိုင်များက ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာတွင် UNHCR မှ ကရင်ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းအရှေ့ပိုင်းနှင့် တနသာင်္ရီတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် လူ ၁၁,၆၀၀ အတွက် အကူအညီ တိုးမြှင့်သွားပါမည်။
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအကူအညီဖြင့် IOM သည် ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီး ဌာနနှင့် ညှိနှိုင်းပြီး လိုအပ်သောပစ္စည်းများ မှာယူခြင်း၊ ပြန်ဝင်ပေါက်နေရာများ၌ COVID-19 စောင့်ကြည့်နေရာများ အင်အားဖြည့်ခြင်းနှင့် ရပ်ရွာအတွင်း ရောဂါကူးစက်မှု ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့သည်။
ကရင်ပြည်နယ်သို့ ရွှေ့ပြောင်းဝင်လာသူ အများဆုံး ရှိနေသောကြောင့် ဤကူညီပံ့ပိုးမှုများသည် ကရင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာနသို့များစွာ အထောက်အကူဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ IOM မှ ကချင်ပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကျန်းမာရေးဌာနများသို့အရေးကြီးသည့် ရောဂါအကာအကွယ် ပစ္စည်းများ ပေးအပ်ခဲ့ပြီး စောင့်ကြည့်စခန်းများအတွက် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းမှုပစ္စည်းများနှင့် အိပ်ယာပစ္စည်းများ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါများနှင့် ခြင်ထောင်များလည်း ပေးအပ်ခဲ့သည်။
UNOPS မှ စီမံပေးပြီး ယူကေနိုင်ငံ၊ ဆွီဒင်နိုင်ငံ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတို့ ပူးပေါင်းထောက်ပံ့သည့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု လက်လှမ်းမီရရှိရေး ရံပုံငွေ (Access to Health Fund) သည် ပြည်ဝင်ပေါက်နေရာများ၌ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အခြေခံစောင့်ကြည့်လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ပြန်လာသူများနှင့်ဆက်စပ်နေသူများ ကွင်းဆက်ရှာဖွေရေးတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသည်။ သို့မှသာ ရောဂါကိုစောလျင်စွာ ရှာဖွေနိုင်ပြီး၊ ရောဂါသံသယရှိသူများကို စောင့်ကြည့်နေရာတွင် ကန့်သတ်ပြီး ရပ်ရွာထဲသို့ ပြန်မရောက်မီ ကွင်းဆက်များ ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
ကုလသမဂ္ဂ လူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းများ ညှိနှိုင်းရေးရုံး (UNOCHA) မှ စီမံသော လူသားချင်းစာနာမှု ရံပုံငွေနှင့် UNOPS ၏ Access to Health Fund တို့၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် IOM သည် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဌာန၏ ပစ္စည်းများမှာယူခြင်းနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပံ့ပိုးလျက်ရှိသည်။
COVID-19 ၏ ပျံ့နှံ့မှုကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ ကြိုးပမ်းမှုကို ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများက ပံ့ပိုးမှုပေးနေပါသည်။ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီး အသီးသီးတို့တွင်
ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေသည့် ထိုလုပ်ငန်းအားလုံးကိုလည်း ကုလသမဂ္ဂမှ ဆက်လက်ပံ့ပိုးမည်ဖြစ်ကြောင်း သန္နိဌာန်ချပါသည်။ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကုလသမဂ္ဂနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည့် ထိလွယ်ရှလွယ်ရှိသောလူများနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ပြန်ဝင်လာသော ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားများ မည်သူမျှ မကျန်ရစ်အောင် ကူညီသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ပြောကြားခဲ့သည့် စကားအရ COVID-19 တိုက်ဖျက်ရာတွင် ကြောက်ရွံ့မှု မပျံ့နှံ့အောင်နှင့် ခွဲခြားမှု မရှိပဲ ခံယူချက်ပြင်းပြစွာ တိုက်ဖျက်ရပါမည်။ စည်းလုံးမှုနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိမှသာ ဤတိုက်ပွဲကို အောင်မြင်နိုင်ပါမည်။